Utshintsho kwidijithali nokubaluleka kokudityaniswa kombono weqhinga | Martech Zone
Utshintsho kwidijithali kunye nokubaluleka kokudityaniswa kombono weqhinga
NgoLwesibini, Februwari 16, 2021 NgoLwesibini, Februwari 16, 2021 UCarter Hallett
Enye yezinto ezimbalwa zokufakwa kwesilivere kwintlekele ye-COVID-19 yeenkampani ibe kukukhawulezisa okuyimfuneko kotshintsho lwedijithali, olufunyenwe ngo-2020 ngama-65% eenkampani ngokwe UGartner. Ibikukuqhubela phambili ngokukhawuleza kuba amashishini kwihlabathi liphela ayiphawule indlela abasebenza ngayo.
Njengobhubhane ogcine abantu abaninzi bebaleka ukujongana ubuso ngobuso ezivenkileni naseziofisini, imibutho yazo zonke iintlobo ibiphendula abathengi ngeenkonzo ezilula zedijithali. Umzekelo, abathengisi abathengisa ngokubanzi kunye neenkampani ze-B2B ezingazange zibe nendlela yokuthengisa ngokuthe ngqo basebenze ixesha elongezelelekileyo ukukhupha amandla amatsha e-commerce, ngelixa ngaxeshanye bexhasa abasebenzi abasebenza ekhaya. Ngenxa yoko, utyalomali kwitekhnoloji entsha inyukile ukuze ihambisane nokulindelwe ngabathengi.
Ukanti ukungxamela ukutyala imali kwitekhnoloji kuba kunjalo into yokwenza kunqabile ukuba ibe sisicwangciso esihle sokwenza. Iinkampani ezininzi zithenga kubuchwephesha obubizayo, zicinga ukuba zinokulungiswa ngokulula kamva ukuze zilungele iimodeli ezithile zeshishini, abaphulaphuli ekujoliswe kubo, kunye neenjongo zamava abathengi, kuphela ukuba badane xa besiba sendleleni.
Kufuneka kubekho icebo. Kodwa kule meko yezoshishino engaqinisekanga, kufuneka kwakhona kubekho ukungxamiseka. Umbutho ungazenza njani zombini ezi zinto?
Enye yezona zinto zibalulekileyo ekuqwalaselweni, njengoko ishishini lihamba ngokupheleleyo, kukudityaniswa kombono oqinileyo we-IT kunye nentengiso ngamehlo ekukhuleni kwedijithali ngokubanzi. Ngaphandle kwawo umbutho usemngciphekweni wokuncipha kweziphumo, ubuchwepheshe obuninzi, kunye neenjongo zeshishini eziphosiweyo. Nangona kunjalo kukho ukungaqondi kakuhle ukuba isicwangciso-qhinga kuthetha ukuyicothisa inkqubo. Akunjalo. Nokuba ishishini sele likhutshiwe, akukabi semva kwexesha lokwenza uhlengahlengiso ukufezekisa iinjongo eziphambili.
Ukubaluleka kovavanyo kunye nokufunda
Eyona ndlela yokudibanisa umbono weqhinga kutshintsho lwedijithali kukuvavanya-kunye nokufunda kwengqondo. Rhoqo umbono uqala kubunkokeli kwaye uqhubeke neengcinga ezininzi ezinokuqinisekiswa ngokusebenza. Qala encinci, vavanya ngeeseti esezantsi, funda ngokuthe kratya, wakhe umfutho, kwaye ekugqibeleni ufezekise iinjongo ezinkulu zeshishini kunye nezemali. Kunokubakho izithintelo okomzuzwana apha endleleni - kodwa ngovavanyo lokufunda, ukufunda ukusilela kuba kukufunda kwaye umbutho uya kuhlala uqhubeka nentshukumo.
Nazi iingcebiso ezimbalwa zokuqinisekisa ngempumelelo, kunye nokufika kwedijithali ngexesha elifanelekileyo kunye nesiseko esomeleleyo seqhinga:
Cwangcisa ulindelo olucacileyo ngobunkokeli. Njengakwezinto ezininzi kangaka, inkxaso evela phezulu ibalulekile. Nceda abaphathi abaphezulu baqonde ukuba isantya ngaphandle kwesicwangciso siyaphikisana. Inkqubo yovavanyo kunye nokufunda iya kwenza umbutho ukuba ufike kwinjongo yawo yokuphela kwelona xesha lifutshane kwaye uqhubeke ukomeleza umbono wayo uphela.
Gcina imali kwiitekhnoloji ezifanelekileyo zenkxaso. Inxalenye yenkqubo yenguqu yedijithali ephumeleleyo kukuqokelela idatha kunye neenkqubo zolawulo, izixhobo zokwenza uvavanyo kunye nokwenza ubuqu, kunye nohlalutyo kunye nobukrelekrele beshishini. Isitaki seMartech kufuneka sijongwe ngokupheleleyo ukuqinisekisa ukuba iinkqubo zinxibelelanisiwe kwaye zisebenza kunye ngokufanelekileyo. Imiba yococeko lwedatha kunye neenkqubo ezinzima zomsebenzi ziimpawu eziqhelekileyo ezifumana indlela yenguqu yedijithali. Iinkqubo kufanele ukuba zinokutsha kwaye zinokuguquguquka ekusebenzeni netekhnoloji esandula ukongezwa njengoko ishishini litshintsha. Ukufezekisa oku, amaqabane e-R2i kunye ne-Adobe njengezisombululo zabo zokunikezela ziyilelwe ukuba zincedisane kunye nobunye ubuchwephesha obukumgangatho ophezulu ngaphakathi kwendalo yemartech, ukudibanisa idatha ukusuka kwimithombo emininzi ukuya kumaqonga aphakathi.
Musa ukuyixakekisa inkqubo. Dibanisa ngokuhamba kwexesha. Imibutho emininzi imi ngobuchwephesha bayo bedijithali okokuqala, oko kuthetha ukuba kuninzi onokukufunda ngaxeshanye. Kububulumko ukuhlasela utyalo-mali ngamaqhekeza amancinci ngenqanaba, ukuqonda iinkqubo njengoko usiya. Kwakhona, imibutho emininzi iphantsi koxinzelelo lwezezimali, oko kuthetha ukwenza okungakumbi ngabantu abambalwa. Kule meko, utyalomali lwakwangoko luya kugxila kukuzenzekelayo ukuze abasebenzi abakhoyo babekhona ukuze bagxile kwimisebenzi eyongezwe ngexabiso. Ngokuseka imephu yendlela yetekhnoloji, ishishini liya kuba lolona lufanelekileyo ekufezekiseni iinjongo zalo ezibanzi.
Zibophelele ekunikeni ingxelo rhoqo ngenyanga okanye ngekota. Ukuze le nkqubo isebenze, kufuneka kubekho ukungafihli malunga noko kufundwayo kunye nokuba kusichaphazela njani na esi sicwangciso sipheleleyo. Misela injongo yokudibana kunye nobunkokheli bequmrhu kunye namalungu eqela aphambili ngenyanga okanye ngekota, ukubonelela ngohlaziyo, ukufunda, kunye neengcebiso zolungelelwaniso lwesicwangciso. Ukuqinisekisa ukumiliselwa okusebenzayo, kunokuba bubulumko ukugcina iqabane ledijithali. Ukuba i-COVID-19 ingqinile nantoni na, kukuba amacebo anzima awasasebenzi kuba xa kuvela imicimbi engalindelekanga, imibutho kufuneka ikwazi ukugweba ngokukhawuleza ukuba yintoni emele ime kancinci kwaye kufuneka itshintshe ntoni. Abalingani abanobuchwephesha kwitekhnoloji kunye nesicwangciso-qhinga banokuqonda okunzulu ngendlela aba dibanisa ngayo. Banokunceda ekuqulunqeni izicwangciso ezahlukeneyo eziza kuhlala zisebenza kwaye ziluncedo kwiinyanga ezintathu, iinyanga ezintandathu, unyaka, nokuba yiminyaka emithathu ukusukela ngoku.
Kunyaka ophelileyo ihlabathi litshintshile- kwaye ayisiyiyo kuphela ngenxa yecoronona. Ukulindelwa kwamava edijithali kuguqukile, kwaye abathengi balindele inqanaba elifanayo lokulunga kunye nenkxaso, nokuba bathenga iikawusi okanye iilori zesamente. Nokuba lunjani udidi lweshishini, iinkampani zifuna ngaphezulu kwewebhusayithi; Kuya kufuneka bazi indlela yokuqokelela idatha yentengiso, indlela yokuqhagamshela idatha, kunye nendlela yokusebenzisa olo nxibelelwano ukuhambisa amava omthengi awenzelwe wena.
Kule ndlela, isantya kunye nesicwangciso-qhinga ayizonjongo ezizodwa. Iinkampani ezizifumana zilungile zezo zinganeli nje ukwamkela uvavanyo lwengqondo kunye nokufunda kodwa zikwathembela kumaqabane abo angaphakathi nangaphandle. Amaqela kufuneka ahloniphe ubunkokheli bawo, kwaye abaphathi kufuneka babonelele ngenkxaso efanelekileyo. Kunyaka ophelileyo bekukho umceli mngeni wokuthetha okuncinci - kodwa ukuba imibutho iyadibana, iyakuphuma kuhambo lwayo lwenguqu yedijithali yomelele, ikrelekrele, kwaye inxibelelana ngakumbi nabathengi bayo kunanini na ngaphambili.
tags: zodakaesizisebenzelayoi-covid-19ucoceko lwedathautshintsho lwe digitalukudityaniswaubunkokheliisitaki seMartechingxeloumbono weqhingaqhingaTechnologyvavanya kwaye ufunde
UCarter Hallett sisicwangciso-qhinga sentengiso yedijithali enearhente yesizwe yedijithali Ukudityaniswa kwakhona. UCarter uzisa iminyaka engama-14 + yamava kunye nemvelaphi ejikelezwe kakuhle ekujongeni iindlela zokuthengisa zemveli kunye nezedijithali. Usebenza kunye nabathengi be-B2B kunye ne-B2C ukuphuhlisa iziseko ezinzulu, ukusombulula imiceli mngeni yabo kwezamashishini, kunye nokwenza unxibelelwano olunzulu kunye nolunentsingiselo, kugxilwe ekubalweni kwamabali ayiliweyo, kumava abathengi be-360-degree, ukuveliswa kwemfuno, kunye neziphumo ezinokulinganiswa.
Ukuprintwa: Ukufunwa okufunwayo kunye nokuzalisekiswa kwe-Embroidery
CrankWheel: Ukucwangciswa kweBypass kunye nokuLanda ngeDemos esekwe kwiSikhangeli